UToboggan ubaleka | Tyelela uHultsfred
Isileyi, isiziba somsila okanye ikhephu?
ekhaya » Bona kwaye wenze » Imisebenzi » UToboggan uyabaleka
Xa kukho ikhephu elaneleyo, zininzi iindawo ezinamathambeka ahlukeneyo agqibeleleyo ekubalekeni okanye ekubalekeni ngekhephu. Nxiba iimpahla ezifudumeleyo, pakisha ubhaka wakho nge tshokholethi eshushu kwaye uphume kwindawo yokubaleka.
Induli emide ethe tyaba. Apha kukho indawo ye-barbeque kunye nokukhanyisa. Intaba kulula ukufikelela kuyo ngemoto.
Ithambeka lenqaba yamanzi liseJärnforsen, limalunga neemitha ezingama-225 ubude linethontsi leemitha ezingama-30. Izibane ziyafumaneka.
IHesjöbacken yinduli ethe tyaba engaphandle kweMarlilla yiHesjön. Ukupaka iimoto kuyafumaneka ekuqaleni kwenduli. Indawo yokukhanyisa kunye nebarbecue iyafumaneka.